Tsy nampino ireo olona ny fisamborana an’i Nini Satar, jiolahy malaza ao Mozambika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2018 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Türkçe, Italiano, Português
Nandritra ny andro voalohany namonjana azy, nilaza i Nini fa hivoaka tsy ho ela | Voaloham-pejin'ny SAVANA, 3 Aogositra 2018 | Saripikan'ny mpanoratra
Mifantoka amin'i Momade Assife Abdul Satar, fantatra kokoa amin'ny hoe Nini, iray amin'ireo voaheloka tamin'ny famonoana an'i Carlos Cardoso, Mozambikana mpanao gazety namoaka ny raharahan-kolikolin'ny governemanta sady mpanorina ny koperativan-gazety voalohany ao amin'ny firenena, tamin'ny novambra 2000 ity raharaha ity.
Nahazo fahafahana arahim-pepetra izy tamin'ny Septambra 2014 rehefa nahavita ny atsasaky ny 24 taona nanasaziana azy. Iray amin'ny antony nomen'ny mpitantana ny fonja amin'ny handrisihana ny famotsorana azy misy fepetra ny fanehoany fanenenana tamin'ny heloka vitany.
Saingy araka ny fanambaràna an-gazety navoakan'ny Biraon'ny Tonia mpampanoa lalàna ambony tamin'ny taona 2017, nitarika fikambanan-jiolahy i Nini ary naka an-keriny Mozambikana mikasa ny haka vola be ho takalony.
Nandritra ny fotoana naha-ivelan'ny fonja azy, tsy mitsahatra ny mamoaka hafatra mitsikera ny rafi-pitsarana, sy ireo olo-malaza ara-politika sasantsasany i Nini.
Nofoanana ny famotsorana azy nisy fepetra ary namoahan'ny Lapan'ny Fitsarana ao an-tanànan'i Maputo didy fampisamborana iraisampirenena izy ary izany no nampiasaina hitazonana azy any Thailandy.
Nilaza i Tomás Vieira Mário, mpamakafaka amin'ny fahitalavitra fa tsy azony ny antony nahatonga ny famoahana an'i Nini, ary noheveriny aza fa lesoka amin'ny rafi-pitsarana ao Mozambika ny fanapana-kevitra toy izany:
Ahoana ilay fitondra-tena tsara? Inona marina ny tena dikan'izany? Inona marina ny safidy noraisina tamin'ny olona iray nahavita heloka bevava tahaka izao no nahafahana namoaka azy misy fepetra ary avy eo nomena alalana hivoaka ny firenena amin'ny voambolana tsy voafaritra mazava.
Fiverenana any am-ponja
Tamin'ny nisamborana azy tao Thailandy, hita ho manana pasipaoro sandoka amin'ny anaran'i Sahime Mohammad Aslam izy.
Nitatitra ny gazety Afrikana Tatsimo fa tafiditra amin'ny raharaham-pakana an-keriny ihany koa i Nini, saingy mbola miandry fanamafisana avy amin'ny manampahefana Mozambikana izay mbola miandry fanambarana ofisialy avy amin'ny governemanta Afrikana Tatsimo izany.
Na dia mbola tsy nilaza antsipirihan-draharaha aza ny manampahefana, dia fantatra fa ny fakana an-keriny (kidnapping) no vesatra voalohany iampangana azy izay tokony hamerina an'i Nini indray ho any am-ponja.
Tokony homarihana, fa mifandraika amin'ireo raharaha voatonona ireo, efa nisy namono ny mpitsara mpampanoa lalàna iray sy voampanga iray tafiditra mivantana na ankolaka amin'ny raharaha.
Tao amin'ny lahatsary iray navoaka tao amin'ny Youtube, azo jerena ny fotoana nandaozan'i Nini ny seranam-piaramanidin'i Bangkok hampodiana ho any Maputo:
Niteraka adihevitra tao amin'ny media sosialy ny fisamborana sy ny fampodiana an-tanindrazana an'i Nini, ary ny tena anontanian'ny maro dia ny antony namoahana azy tamin'ny taona 2014 sy ny sata maha-mpandositra ny fonja azy, nefa dia tsy mitsahatra ny hitam-bahoaka i Nini. Nanamarika i Jenny Baptista, mpisera Facebook:
Mba vaovaon'adala koa! mpandositra ny fonja tokoa i Nini Satar izay tsy mitsahatra ny mamoaka zavatra efa ho isan'andro ao amin'ny Facebook ary indraindray aza izany miaraka amin'ny toerana misy azy? Tsy hain-dry zareo intsony izay foronina?
Nanontany mihitsy aza i Caliste Meque Meque, mpikambana ao amin'ny Renamo (antoko mpanohitra lehibe indrindra), raha azo heverina ho mpandositra ny fonja i Nini, satria nankatoa ny famotsorana azy ny fitsarana Mozambikana:
Nivoaka noho ny famotsorana misy fepetra i Nini Satar tamin'ny 5 Septambra 2014, rehefa nahavita ny antsasaky ny 24 taona nodidiana hanasaziana azy, mifandraika amin'ny famonoana an'i Carlos, mpanao gazety. Rtoa Mpitsara ô, mpandositra ve ny olona iray nahazo fanafahana misy fepetra?
Ny sasany, toa an'i Eduardo Domingos, mpianatra ao amin'ny Oniversite Eduardo Mondlane (UEM), nampiasa ny fisamborana an'i Nini hampahatsiarovana ireo mpitarika politika ao Mozambika hisambotra ireo jiolahy (trondro vaventy sady atahorana kokoa) miasa ao amin'ny governemanta.
Ny jiolahy mampidi-doza indrindra eto Mozambika dia ilay iray manao ny firenena ho mpitrosa ary tsy nodidian'ny fitsarana hosamborina. Ny jiolahy mampidi-doza an'i Mozambika dia ilay, tsy misalasala, milaza fa raha misy ny azo anararaotana dia haka ireo trosa miafina homena ny fianakaviany izy.
Izy ilay mampijaly ny rafi-pitsarana ao amin'ny firenena sy ireo andrim-panjakana rehetra ao aminy no jiolahy atahorana indrindra ao Mozambika. Ny jiolahy atahorana indrindra eto Mozambika dia ilay iray mamono olona an-jatony maro any amin'ny hopitaly noho ny tsy fisian'ny fanafody. Ny jiolahy atahorana indrindra eto Mozambika dia ilay iray izay manameloka ny 45 isanjaton'ny zanatsika ho tsy afaka amin'ny tsi-fanjarian-tsakafo lalina.
Mandritra izany fotoana izany, mpisera Twitter iray nanonona ny fisamborana an'i Nini any Thailandy ho tsi-fahombiazan'ny polisy ao Mozambika sy Afrika Atsimo hisambotra ilay lehilahy karohina:
Nini Satar, andrin'ny mpaka Karana an-keriny, miasa ao Mozambika sy Afrika Atsimo nosamborina sy nohadihadiana any Thailandy. Tsy nahavita nisambotra azy ny polisin'i Mozambika sy Afrika Atsimo. Izany no lazainao fa vondrona polisy matihanina.